မဒမ်ကိုး: စက်ဆန်းပေါက်ကွဲမှုအလှုပြီးစီးခြင်း ( ၁ ) (ဓါတ်ပုံ + အင်တာဗျူးအသံဖိုင်)
မှတ်ချက်။..။ယခုလို အလှုဓါတ်ပုံများ တင်ပေးရခြင်းသည် ကြွားဝါခြင်း၊လက်ခံရရှိသူများအား အရှက်ရစေ လိုခြင်း မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံစုံမှ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် မြန်မာမုဒိတာလူငယ်များအဖွဲ့၏ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက် ခြင်း၊အများသူငါ မုဒိတာပွားနိုင်ရန်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအပ်ပါသည်။)
၁၀။ကိုမျိုးသူအောင် ကိုယ်စား တပ်ကြပ်ကြီး ဒေါ်သန်းသန်းဌေးမှ လက်ခံရယူသည်။
အင်တာဗျူး အသံဖိုင်ကိုတော့ edit လုပ်စရာလေးတွေ ရှိလို့ နောက်နေ့မှ တင်ပေးပါမည်ခင်ဗျား။
ကြည်နူးဝမ်းသာစ၇ာ မြင်ကွင်းလေးတွေ ပါလားနော်... ။
မွန်မြတ်တဲ့ အလှူဒါန လေးမြတ်စွာ လေးစားစွာ ကြက်သီးထမျှ ကြည်နူးစွာနဲ့ သာဓုခေါ်သွားပါတယ်ဗျာ.. သာဓု၊သာဓု၊သာဓု။။ ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်များလည်း ကောင်းရာသုဂတိ လားကြပါစေ။။ ဒဏ်ရာရ ရဲဘော်များလည်း အမြန်ဆုံး သက်သာပျောက်ကင်းပါစေလို့ ဆန္ဒပြု ဆုတောင်းပါတယ်။။
ကိုရင်နဲ့ ဒို့ မ ရေ စာတေါလည်း ကူးတင်ပီးပီနော်
ကိုရင်နဲ့ မဒိုးကန်တို့ရေ ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓု သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် ခေါ်မိပါကြောင်း သာဓု သာဓု သာဓု...။
ဒီလောက်ကလေးနဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ ၀မ်းနည်းကြေကွဲမှု့တွေကို မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးလို့ထင်မိတယ် .
ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ ကြေကွဲဝမ်းနည်းသူများရဲ့ ရင်ကို အေးငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ လေအေးတစ်ချက်ဖြစ်ခွင့်ရပါလို၏.
ရူပါ မလန်းပေမဲ့ မန့်ပါရစေ မဒမ်
ှ့Share ခွင့်လေး ပေးပါ ခဗျာ
. မြန်မာမုဒိတာ လူငယ်များအဖွဲ.
ဒီလို ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ မြင်ရတာ သဘောကျတယ်။ တင်ပေးတာကျေးဇူး ကိုရင်နဲ့ မမ မဒိုးကန်ရေ.. :D :D
အလှူအတွက် ကြည်နူးစွာ သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်သွားပါတယ်ရှင်း) ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းမျိုးလေးတွေကို တကယ်ပဲ လေးစားမိပါတယ်။
ကိုရင်ရေ... မွန်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်ဒါနအတွက် ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်၊ လူငယ်တွေ အဲလိုပရဟိတစိတ်ဓာတ်ရှိကြပြီး ကိုယ်တိုင်အားကျိုးမာန်တတ် ဆောင်ရွက်နေကြတာကို တကယ်လေးစားပါတယ်။ နောင်များအလျဉ်းသင့်ရင် လှူဒါန်းပါဦးမယ် ကိုရင်ရေ...။
သာဓု သာဓု သာဓု ပါတော် ။ ခုလို လှူဒါန်းရသော အကျိုးကြောင့် ဒီလင်မယား လိုချင်တဲ့ အရာ ကို လိုချင်တိုင်း ချောချောမွေ့မွေ့ ရပါစေသောဝ် ။
ခုဘဲ ပီတိ အရသာ ခံစားနေရပီနော့ ။
သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ဆိုပြီးတော့ .. လေးစားမိပါတယ်ဗျာ။
အဲဒီလို အားကြိုးမာန်တက် စေတနာသဒ္ဓါ ထက်သန်စွာနဲ့
လှူဒါန်းမှုအတွက် သာဓု သာဓု သာဓု ခေါ်ဆိုပါတယ်
မဒိုးရေ။ အခုလေးကြိမ်မြောက် လာဖတ်သွားတယ်နော်။
သာဓု သာဓု သာဓု ခင်ဗျာ...
zmo zmo said...
ချီးကျူးပါတယ်... ဂုဏ်ယူပါတယ်... သာဓုခေါ်ပါတယ်...ခင်ဗျာ...
မွန်မြတ်တဲ့ အလှူလေးအတွက် သာဓု သာဓု သာဓုပါဗျာ...
အင်မတန်ကို ၀မ်းသာတယ်ဗျာ။ အွန်လိုင်းနဲ့ဘလော့တွေနဲ့က အတော်ကို အလုပ်ဖြစ်တယ်။ လူချင်း မမြင်ကြပေမယ့် စည်းရုံးမိကြတာလည်း ဂုဏ်ယူမိတယ်
နောက်ဆုံးတော့ သာဓု သုံးကြိမ် လှိုက်လှိုက် လှဲလှဲ ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ